ကိူထီးရိုဘုရားလမ်းတလျှောက်ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရသော………………………………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကိူထီးရိုဘုရားလမ်းတလျှောက်ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရသော……………………………….
ကိူထီးရိုဘုရားလမ်းတလျှောက်ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရသော……………………………….
Posted by မိုး မင်းသား on May 8, 2012 in Drama, Essays.., History, Myanmar Gazette |9comments
လွန်ခဲ့ သော(၂)နှစ်လောက်ကအကြောင်းလေးတစ်ခုကိုရွာသူရွာသားများဖတ်ဖို့ တကယ်ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရတဲ့ …..ကိူက်ထီးရိုးခရီးသွားတောလားအကြောင်းရင်ဖွင့် လိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း၉၉)ယောက်နဲ့ ဘုရားပေါ်ကိုခြေလျှင်တတ်ခဲ့ ကြပါတယ်…အရင်ဆုံးကျားဆွဲဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်းဆိုတဲ့ (အလှူခံနေရာကိုဖြတ်မိပါတယ်….)အလှူခံနေတဲ့ သးများကထိုင်ပြီးကန်တော့ ခိုင်းပါတယ်..အလှူငွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လှူဒန်းပါဆိုပြီးဆော်သြပါတယ်…တကယ်လို့ မလှူခဲ့ ရင်…ထိုင်မကန်တော့ ရင်…..
“သူတို့ ပြောပုံအရ….ကျားပဲထွက်ဆွဲတော့ မလိုလို….(အခုပဲ…..)။
အဲဒီလို..တောင်ပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်တတ်ရင်းရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်လာခဲ့ ပါတယ်…။ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ ကိူက်ထီးရိုဘုရားကြီးကိုဖူးလိုက်ရတော့ ရင်ထဲကအမောတွေပြေပျောက်သွားပါတယ်…။ဒီလိုနဲ့ ကျီးပါးစပ်နဲ့ မုဆိုးတောင်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ ပါတယ်..(မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပါပဲ)….ကျီးပါးစပ်ရောက်တော့ ဂူထဲမှာရှိတဲ့ 
ဘုရားကိုဖူးကြပါတယ်….အော်…ဒါနဲ့ …စကားမစပ်အခုကျီးပါးစပ်ထဲဝင်ဖို့ ကိုယ့် အဖွဲ့ လူအရေအတွက်နဲ့ တုံကင်(တန်းစီဝင်)စနစ်နဲ့ ဝင်ရပါတယ်….
တုံကင်ယူတဲ့ အခါမှာလည်းအလှူငွေထည့် ရပါတယ်….ဂူထဲမှာရှိတဲ့ ဘုရားကိုဖူးပြီးဂူပြင်ကိုထွက်ဖို့ လုပ်တဲ့ အခါအထဲကအလှူခံတဲ့ လူက…ကိုယ်ဝင်လာတဲ့ ဂူကဘာဂူလည်းဆိုတာ..သတိထားဦးလို့ ဆိုပါတယ်…ဘာကိုပြောချင်တာလည်း…..အလှူခံချင်တာလား…ခြိမ်းခြောက်ချင်တာလား…..
ဒီလိုနဲ့ ဈေးတန်တလျှောက်ဟိုငေးဒီကြည့် လုပ်ရင်းမုဆိုးတောင်ဘုရားကိုရောက်ခဲ့ ပါတယ်…(ဟိုနေရာနား..ဒီနေရာနားကိုတော့ ထည့် မရေးတော့ ပါဘူး……
မောလို့ ရေအိုးကရေတစ်ခွက်သောက်မိပါတယ်….ရေတော့ သောက်တယ်..အလှူငွေတော့ မထည့် ကြဘူးလို့ ပြောပါသေးတယ်…ထားပါသူတို့ ကရေလှူတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ …မေးချင်ပါသေးတယ်…။
ဒါနဲ့ မုဆိုးတောင်မှာခရီးတထောက်နားပြီး..ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားဖက်ကို…ခရီးနှင်ခဲ့ ပါတယ်…….။
လမ်းတလျောက်မှာဖူးခဲ့ ရတဲ့ ဘုရားများကတော့ …ဖါးဘုရား…ငါးဘုရားကျောက်လှူပ်ဘုရား…အစသဖြင့် ကျောက်ထပ်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ ပါတယ်….။
ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားမှာရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခဲ့ ပါသေးတယ်…။ကျောက်ထပ်ကြီးမှာရွှေသင်္ကန်းကပ်ပုံကထူးဆန်းတယ်လေ…ဘုရားပေါ်ကိုရေ့သင်္ကန်းကပ်ပေးမဲ့ လူက၀မ်းလျှားထိုးတတ်ပြီးပြန်ဆင်းတော့ လက်လွှတ်ပြီးဝမ်းလျှားထိုးပြန်ဆင်းလာပါတယ်…ကြည့် လို့ တော့ အကောင်းသား..
ကျောက်ထပ်ကြီးကပြန်တော့ လမ်းဘုရားဖြစ်တဲ့ ကျောက်စည်ယိုဘုရားမှာရေအိုးတစ်လုံးလှူခဲ့ာာာာာာာကြသေးတယ်လူ(၉)ယောက်ရေအိုးတစ်လုံးလှူတာကို…..
လူက(၉)ယောက်ရေအိုးကတစ်လုံးပဲလှူနိုင်တာလားလို့ မေးတာခံလိုက်ရပါတယ်….ဒေါသထွက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့ တော့ …..ကုသိုလ်ကတော့ မရတော့ ပါဘူး…
တစ်ညအိပ်ပြီးတော့ …မနက်(၈)နာရီလောက်မှာရေတံခွန်ဖတ်ကိုဆင်းဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်….။ရေတံခွန်သွားတဲ့ လမ်းမှာဘာအလှူခံမှမရှိပါဘူး….။
စိတ်ချမ်းမြေ့ စရာပါ…..။အဆင်းကိုကုန်းဆင်းတွေပဲမို့ အတတ်ကိုတော့ လေးဖတ်တောင်တတ်ရတဲ့ သူတွေလည်းတွေ့ ခဲ့ ရလို့ ရီစရာတွေဖြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်….။
ရေတံခွန်သွားတဲ့ လမ်းမှာ“ကိုးန၀င်း”..ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဖြတ်ရပါတယ်…ကျောင်းထိုင်ဘုန်းဘုန်းကလာသမျှလူတွေကို(အယုတ်..အလတ်…အမြတ်..မရွေး)
သတ်သတ်လွတ်ထမင်းကျွေးပါတယ်….ထမင်းစားပြီးရသောက်ဖို့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ အစာကြေဆေးကိုလည်းကျွေးပါသေးတယ်….နည်းနည်းနောနောကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူး…..။
ညကျတော့ တစ်ကိုယ်လုံး…ကိူင်ရိုက်ထားသလို…..တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆေးတွေလိမ်းပေး…ဆေးတွေသောက်ရင်းအိပ်ခဲ့ ရပါတယ်…..။
လမ်းဘုရားတွေဝင်ပြီး….ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ ပါတော့ တယ်………..။
မှတ်ချက်……..အလင်းဆက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ ရေးချင်စိတ်…..တအားဖြစ်လာလို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်……
About မိုး မင်းသား
မိုး မင်းသား has written 48 post in this Website..
သတိ ရခြင်း ငှက်... အချစ်ပင် ထက်မှာ ရောက်နေတယ် ။
View all posts by မိုး မင်းသား →
moe minthar ရေဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ်
ပြင်ပြီးမှဖတ်တော့မယ်နော်။ အခုကြေိုးစားကြည့်တာဖတ်မရလို့။ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ပြင်ပေးပါအုံး။
ဘာသာရေး အရေခြုံထားတဲ့ ကန်ထရိုက် ဘက်တော်သားတွေ…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အ၀ီဇိ ဆင်းမှာကို မားကတ္တင်း ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတဲ့ …
နလပိန်းတုံးတွေကို သည့်ထက်မက သမ ..သင့်သေးပါရဲ့ ….
သည်လိုများများရေးပေးမှ မသိဘဲ လူကြီးပြောခိုင်းတိုင်းပြောတဲ့လူတွေ..နောက်ပြီး ..
လူဂျီးလုပ်နေပြီး awareness မရသူတွေ ကိုယ်ရှိန်သတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်…
သည်လို ပိုစ့်တွေကိုတော့ဖြင့် …အလွန် အားပေးနေပါကြောင်း..
(အကြောင်းအရာ အတိအကျ ခိုင်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ အချိုပေါ် သကာလောင်းပေါ့ဗျာ)
ကျုပ် ဒီနှစ်လဲ ကျိုက်ထီးရိုးသွားသေးတယ်…။
အလှူခံတွေအားလုံးကို လှူချင်စိတ်မရှိလို့ လုံးဝ မလှူခဲ့ဘူး..။
ကျိုက်ထီးရိုးဂေါပက ကလဲ- တောင်တက်ကားခတွေရဲ့ ၂၀% ကိုရနေမှပဲ..
ရလေ လိုလေ ဆိုတာ…။
ကျနော်လည်း ရေအိုး တစ်လုံးနဲ့ ရေ တစ်ထမ်း လှု ခဲ့ ဖူးပါတယ်..ရေတံခွန်ကို အသွားမှာ လှုသွားတာပါ..သေသေချာချာ
ရေအိုးမှာ စာတွေ ရေးပေးပါတယ် အလှုရှင်နံမည် ပေါ့..ဓာတ်ပုံတောင်ရိုက်လိုက်သေး….အပြန်ကျတော့..အဲ့ဒီရေအိုးနေရာ
မှာ နောက်ထပ် ရေအိုးတစ်လုံး အလှုရှင်နံမည်နဲ့ ..ရောက်နေတာတွေ့ ခဲ့ ရတာဘဲ…အလှုရှင်တွေ များချက်က တော့…ဟိဟိ..
ဘာလိ်ု့ ….အခုမှ..ဒီလိုခေါ်ရတာလဲ..။ စိတ်ဆိုးတယ် …စိတ်ဆိုးတယ်..လျှာကို ပတ်တီးစည်းပြီးစကားလာပြောလို့ ..နားကလစ်ကလစ်ဖြစ်တယ်..။
အခုလို ကျွန်တော့် ပို့်စ်နဲ့ ပုံတွေ.ကို ..ခံစားပြီး..ဆက်ရေးဖြစ်တာ ၀မ်းသာပါတယ် ။ဒီအကြောင်းတွေ.ကျွန်တော်လည်း..ရေးချင်နေပေမယ့်.ရေးချိန်မရသေးတဲ့ အတွက်..ရေးနိုင်အား..ရှိသူတွေ.ကို ရေးစေချင်နေတာပါ ။ အလှုခံ..တာက ဘုရားအတွက်..အလှုခံတာ..ဟုတ်ရဲ့ လား..လို့ တောင် သံသယ ၀င်စရာတွေ..လေ ။ ဆက်လက် ရေးသားပါဦး..နော် ။
အဲလေ…အလင်းဆက်( ကျားစစ်စစ် )
ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ သောက်ရေအိုး ၁အိုးလှူတယ်။ ၁အိုးလှူတော့ ၁ထမ်းလှူပါလားတဲ့.. ကဲ မထူးပါဘူးကွယ်.. ၁ထမ်းပေါ့.. အပြန်ကြတော့ တခါ ရေလှူပါအုန်းလားတဲ့.. လူက ငြိမ်နေပေမဲ့ ဒေါသကတော့ မငြိမ်ဘူး.. ဟဲ့.. ငါ အသွားတုန်းက တထမ်းလှူပြီးပြီဟဲ့ လို့ ငေါက်လိုက်တော့ ငြိမ်သွားတယ်။
အဲဒါ အလှူခံမဟုတ်ဘူး … အေးဒမြတွေ … ဘုရားသွားတာ ဒမြတိုက်နေသလိုပဲ …
ဒီလိုပိုစ့် တွေကို…..ရေးချင်နေတာကြာပါပြီ….အလင်းဆက်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ရေးဖြစ်သွားတာပါ……..။
သဲနုအေးရေ……သူကြီးကိုတော့ ပူစာထားပါတယ်…ခဏလေးစောင့် ပေးပါနော်…..